on February 03, 2016 Related - Essays Khin Lay
သူ့သမီးလေးကို တချိန်လုံးပွေ့ချီပြီး၊ အခန်းထဲမှာ ကလိုက် သမီးလေးနဲ့ စကားတွေပြောလိုက်နဲ့ ချစ်မ၀ဖြစ်နေတာပေါ့။ ပါးစပ်ကလည်း "အဖေသိပ်ချစ်ရတဲ့ သမီးငယ်လေးရေ……" ဆိုပြီး တချိန်လုံးခေါ်နေခဲ့တယ်လေ။
ဒီလိုနဲ့ သူ့သမီးလေးလည်း အရွယ်ရောက်လာခဲ့တယ်။ သမီးလေး အရွယ်ရောက်လာပေမယ့်လည်း သူကတော့ သူ့သမီးလေးကို ဖက်ထားပြီး " အဖေသိပ်ချစ်ရတဲ့ သမီးငယ်လေးရေ……. " လို့ အရင်ကလိုပဲ လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့သမီးက "ကျွန်မ ကလေး သေးသေးလေး မဟုတ်တော့ဘူး ဖေဖေ…" လို့ ဆူဆူပုတ်ပုတ်လေးပြောပြီး လှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ သူကတော့ သူ့သမီးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူလေးတွေကိုကြည့်ရင်း တဟား ဟားနဲ့ ရီမောပြီး "ဖေ့ဖေ့ အတွက်တော့ သမီးက ကလေး လေးပါပဲကွယ်…" လို့ လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာ တကယ့်ကို မေတ္တာတရားကြီးမားပြီး၊ မိသားစုနဲ့ သူမအပေါ်မှာ ခွန်အားတွေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ပေးနိုင်တဲ့ သူဟာ သူမရဲ့ဖေဖေပဲဆိုတာကို ကမ္ဘာလောကြီးထဲ တယောက်တည်း ကျင်လည်နေရင်း သူမ သိလာခဲ့တယ်။ သူမ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဘယ်နေရာကိုပဲထွက်သွားပါစေ သူမကို အမြဲတမ်းနွေးထွေးမှုတွေပေးပြီး ဖုန်းဆက်တိုင်း " ဖေဖေချစ်တဲ့ သမီးငယ်လေးရေ…."လို့ ဖေဖေက အမြဲပြောနေတုန်းပါပဲ။
တရက်….. " ဖေဖေချစ်တဲ့သမီးငယ်လေးရေ…." လို့မကြားနိုင်တော့တဲ့ရက်။ အဲ့ဒီရက်ကို အခုတော့ ရောက်လာပါပြီ။ သူမရဲ့ဖေဖေဟာ လေဖြတ်ရောဂါကို ခံစားနေရပြီး၊ အသက်ကိုတောင် ခက်ခက်ခဲခဲရှူသွင်း ရှူထုတ်လုပ်နေရပြီတဲ့။ သူဟာ စကားလည်းမပြောနိုင်တော့သလို၊ သူ့ကိုစကားလာပြောရင်လည်း နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ ဆရာဝန်တွေက သူမကို ရှင်းပြပါတယ်။
" ဖေဖေချစ်ရတဲ့ သမီးငယ်လေးရယ်……."
(Chicken Soup Teenage Soul စာအုပ်ထဲက Patty Hansen ရဲ"့Heart Song" ကိုဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ရေးဖွဲ့ထားပါသည်။)